(ASEAN Parliamentarians for Human Rights)လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့။
(Photo: APHR Facebook)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးကော်မရှင် (IFFM) က တင်ပြတဲ့ အစီရင်ခံစာအရ ဒုက္ခသည်တွေ တရားမျှတမှုရဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ (APHR) က ဒီနေ့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
“စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ အမှန်တကယ်လိုအပ်သလို အလွန် စိတ်ထိခိုက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ရက်ရက်စက်စက် ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေကိုလည်း ဖော်ပြထားတယ်” လို့ အာဆီယံအမတ်များအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ချာလီဆန်တီယေးဂိုးက ပြောပါတယ်။
နောက်နောင်ကို ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေ မကျူးလွန်အောင် ကမ္ဘာက တိတိကျကျ အရေးယူရမယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ ဒီလိုအရေးယူဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့ သီးခြားခုံရုံး ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ဆောင်ရွက်နိုင်သလို၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်း ထောက်ခံဖို့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ ချာလီဆန်တီယေးဂိုးက ပြောပါတယ်။
အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) လွှဲပေးဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီကို တိုက်တွန်းထားသလို၊ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တပ်မတော်က ကျူးလွန်ထားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ICC က စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတယ်လို့လည်း အာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
Myanmar isasovereign country. We have our own rules. There are thousands of mosque in Myanmar. There is notasingle Pagoda in those so-called Muslim countries. Is that fair? I noticed those organizations are dominated by muslim.what do you say?
Sep 20, 2018 06:38 PM